ကဝမြို့နယ်ရှိ အောင်ဆုပန် အလက(ခွဲ)ကျောင်း သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး ပြန်လ?? - Yangon Media Group
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ အလက(ခွဲ) ကျောင်းတစ်ကျောင်းသည် သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) ကဝမြို့နယ်ရှိ အောင်ဆုပန် အလက(ခွဲ)ကျောင်းသည် အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်က လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး ပြန် လည်တည်ဆောက်ပေးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ တင်ပြထားသော်လည်း ယာယီ ကျောင်းဆောင် ဖြစ်သည့်အတွက် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ဘတ်ဂျက်ချပေးသော အခြေအနေ နည်းပါးကြောင်း၊ ယင်းအတွက် အဆိုပါကျောင်းဆောင်ကို ရပ်ရွာအကူအ ညီဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ဆွေးနွေးနေပြီး အခြားမှလည်းအလှူခံပြီး တည်ဆောက် နိုင်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ကျောင်းပိတ်ရက်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် သင်ကြားရေးများ မရှိသေး ကြောင်း၊ ကျောင်းဖွင့်အမီတွင် အဆိုပါကျောင်းဆောင်ကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိပါ က ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သင်ကြားရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါကျောင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အလယ်တန်းပြ ဆရာဦးထင်လင်း ထက်ထံမှ သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောင် သုံးဆောင်ရှိပါတယ်။ တစ်ဆောင်ပဲ အစိုးရက ချပေးထားတာပါ။ အခု ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောင်က အလယ်တန်းကျောင်း သားတွေ သင်တဲ့အဆောင်ပါ။ အရင်ကတည်းက ဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းဆောင်မရှိလည်း ရပ်ရွာကပဲ လုပ်ပေးတယ်။ ဆရာမရှိလည်း ရပ်ရွာကပဲ ငှားပေးတယ်။ ပျက်စီးသွားတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်စရိတ် သွားတင်တယ်။ သွားတင်တော့ ဒီကျောင်းဆောင်က ယာ ယီကျောင်းဆောင်ဖြစ်လို့ ပြင်ဆင်စရိတ် ပေးနိုင်ခြေနည်းတယ်လို့ သိခဲ့ရတယ်။ တင်တော့ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ရပ်ရွာနဲ့ပဲ လုပ်ရမယ့်အနေအထားပါ။ ရပ်ရွာကလည်း လေပြင်းတိုက် တော့ သူတို့အိမ်တွေ ပျက်စီးကုန်တယ်။ သူတို့အိမ်တွေ ပြင်ဆင်တုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဘက်ကို လှည့်ကြည့်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူး”ဟု အလယ်တန်းပြဆရာဦးထင်လင်း ထက်က အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်ကပြောသည်။
အဆိုပါကျောင်းဆောင်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် သွပ်နှင့် ဝါးတန်ဖိုး ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကျပ် ၁၈ သိန်း၊ သိန်း ၂ဝ ခန့် ကုန်ကျနိုင်သည့်အတွက် ရပ်ရွာ၏အကူအညီအပြင် အခြားအကူအညီများလည်း လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။ ”ကျောင်းဖွင့်အမီကို ပြန်မဆောက်နိုင်သေးရင်တော့ ကလေးတွေကို ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာပဲ သွားသင်ရမှာပဲ။ ကျောင်းဆောင်မရှိလို့ မသင်ရဘူးဆိုရင် ကလေးတွေ ပဲ နစ်နာမှာ”ဟု ဦးထင်လင်းထက်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အလက(ခွဲ) အောင် ဆုပန်ကျောင်းတွင် မူလတန်းမှ အလယ်တန်းအထိ တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂ဝဝ ကျော်ရှိပြီး ပျက်စီးသွားသော ကျောင်းဆောင်မှာ အလယ်တန်း ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူ ၈၇ ဦး သင်ကြားနေသော ကျောင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
တေးသံရှင် စည်သူလွင်၏ 'A Part Of Me' အမည်ရှိ တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်မည်
မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်နှင့် ညောင်ဦးမြို့နယ်တို့တွင် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင??